UDUMO LUNGOLWAKHO, DAN CARTER | Scrolla Izindaba
“Okuhle kunakho konke” inkulumo mpikiswano eyenziwe kule ndawo yokucima ukoma inamabhiya amaningi nothando nokuqhathanisa okungenangqondo. Kepha akekho ozokuphika ukuthi uDan Carter, oneminyaka engama-39 manje, ungomunye wama-flyhalves amakhulu emlandweni wezemidlalo – futhi izinga lakhe lomsebenzi obabazekayo liyakuxhasa lokho.
Uthole amaphuzu ayi-1,598 ngama-try angama-29, ama-conversions angama-293, amaphenathi angama-281, kanye nama-drop goals ayisishiyagalombili emidlalweni eyi-112. Uthole isilinganiso esingaphezu kwamaphuzu ayi-14 emdlalweni kamunye, okuyisilinganiso esiphakeme kakhulu sabadlali abashaya amagoli aphezulu.
Ukwengeza kulokhu, waqokwa njengomdlali ovelele we-International Rugby Board ngonyaka wezi-2005 nangowezi-2012, futhi usenqobe izicoco ezine ze-Super Rugby namaCrusaders, ama-Tri-Nations ayisithupha kanye ne-Rugby Championship edlalela ama-All Blacks futhi wayelilungu leqembu elanqoba isicoco sendebe yomhlaba yebhola lombhoxo ngowezi-2011.
Kodwa okungabalwa yizibalo yinani lezinto ezishintsha umdlalo kanye nokwephuka komugqa okukhanyayo okuye kwaba izinkinga kanye nama-halfbacks azungeza ngokudida.
(Ngokuqhathanisa, i-flyhalf yaseNingizimu Afrika uMorné Steyn akayona i-tackler enkulu noma i-line breaker, futhi noNaas Botha omkhulu wayengekhona lokho. Ikhono likaHandré Pollard lokwephula umugqa ngesikhathi kubalulekile lalibamba iqhaza elibalulekile empumelelweni yamaBhokobhoko kwiNdebe Yomhlaba yowezi-2019.)
Kepha-ke, kunezinto ezimbili kuDan Carter ukuthi abafana abanothando notshwala kule ndawo yokuphuza bonke bazovuma ngokushesha ukuthi: UDan Carter wayengumdlali wemvelo, owangempela, okwathi izikhathi eziyisishiyagalolunye kweziyishumi wenza izinqumo ezifanele lapho kudingeka ukuba zenziwe – futhi mhlawumbe isinqumo sakhe sokuthatha umhlalaphansi ngalesi sikhathi, siyisinqumo esifanele uma kunendaba.
Kuyafaneleka futhi ukuphawula, ukuthi emkhakheni weminyaka engama-20, akukaze kube khona ngisho nokuncane okucasulayo okuyihlazo. Iqhawe langempela. Ngicela uthathe udumo, Daniel William Carter.
Umthombo wesithombe: @ RugbyLAD7